Yintoni Magnesium L-threonate?
Imagnesium L-threonate (778571-57-6Imile njengeyona ndlela ifanelekileyo yokufumana iipilisi zemagniziyam kwintengiso yanamhlanje. I-Magnesium sisimbiwa esiqhelekileyo esinokubakho kukutya okwahlukileyo kwaye sibaluleke kakhulu kwimpilo yabantu njengoko sisetyenziswa kwiiseli ezingaphezulu kwama-600 kwisistim somzimba wakho.
I-Magnesium L-threonate iye yanelungelo elilodwa lomenzi phantsi kwegama elithi Magtein kwaye kuphela kwesiyobisi esibonakalise ukuba siyasebenza ekuphuculeni amanqanaba e-magnesium kwingqondo. Lonke ilungu okanye iseli emzimbeni wakho lifuna i-magnesium ukwenza imisebenzi yalo ngokufanelekileyo. Le minerali inegalelo kwimpilo yethambo, izihlunu, intliziyo kunye nokusebenza ngokuchanekileyo kwengqondo.
Kwelinye icala, i-magnesium iyanceda kunyango lweengxaki zokulala. Zininzi iindlela zokuxhasa i-magnesium kwimarike namhlanje, kubandakanya i-magnesium oxide, i-magnesium citrate, kunye ne-magnesium chloride. Zonke ezi fomu zisetyenziswa ukuphucula amanqanaba amaminerali emzimbeni kunye noncedo ekukhuthazeni imisebenzi yeseli kunye nemizimba.
Iindaba ezilungileyo kukuba i-magnesium L-threonate powder ifumaneka ngokulula kokubini kwi-intanethi nakwiivenkile ezibonakalayo ezikungqongileyo. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba ufumana iyeza likagqirha kugqirha ukuze ufumane iziphumo ezingcono.
Kanye njengokuba i-magnesium L-threonate iluncedo kwinkqubo yomzimba wakho, inokukhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu xa zisetyenziswe gwenxa okanye zenziwe ngokweqile. Kanye njengokuba uthatha nayiphi na enye i-nootropic, ebandakanya ugqirha wakho kuyo yonke inkqubo yethamo kukuqinisekisa ngomgangatho kunye neziphumo ezinomtsalane.
Ingaba kwenzeka njani I-Magnesium L-threonate ukusebenza?
Eyona nto iphambili kukusebenza kwe-magnesium L-threonate kukunyusa amanqanaba e-magnesium kwinkqubo yomzimba wakho kunye nokunceda ekuphuculeni ukusebenza kweeseli kunye namalungu. Njengoko kuchaziwe ngaphambili, i-magnesium idlala indima ebalulekileyo ukunceda ukusebenza kweeseli zomzimba wakho.
Iiminerali yeMagnesium iyafumaneka kwiintsuku ezahlukeneyo zokutya ozithatha phantse yonke imihla. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha amanqanaba amaminerali anokuhla kwaye akuveze iimeko ezahlukeneyo zempilo. Umzekelo, amanqanaba aphantsi e-magnesium angakhokelela kwiingxaki zemvakalelo, uxinzelelo, unxunguphalo, ukubetha kwentliziyo, intloko ebuhlungu, kunye ne-migraine. Iimbaleki zineengxaki zokuhlaselwa yimisipha kunye namawele xa zinqongophele i-magnesium kwiinkqubo zemizimba yazo.
Ngaphezulu kwe-magnesium esempilweni ekhoyo ekutyeni kwakho, ukuba amaminerali akwanelanga ukulungiselela ukusebenza kweeseli zakho kunye namalungu, ke ugqirha wakho unokumisela iMagnesium L-threonate. Imizimba yabantu yahlukile, kwaye ke, ayinguye wonke umntu oya kufumana iingxaki ezifanayo xa bephethwe kukunqongophala kwe-magnesium. Nangona kunjalo, iMagnesium L-threonate ingqineke iyinto yokuxhasa eyongezelelweyo ye-magnesium. Kuxhomekeke kwinqanaba lakho lokusilela kwe-magnesium, iMagnesium L-threonate ihambisa izibonelelo ezibalulekileyo xa zisetyenziswe ngokuchanekileyo.
Nje ukuba uthathe umthamo wakho we-Magnesium L-threonate, iyeza lifakwe kwinkqubo yakho yomzimba ngokukhawuleza kwaye liqale ukusebenza ngokukhawuleza. I-magnesium eyaneleyo emzimbeni wakho yenza iziphumo zokuphucula umsebenzi wokuqonda kunye nenkumbulo, yonyusa ukusebenza ngokuchanekileyo kwemisipha yomzimba kunye neervesi kunye nokunyusa amanye amalungu omzimba asebenza ngokwaneleyo. Kwisisu sakho, iiminerali ye-magnesium idlala indima ebalulekileyo ekuchaseni iiasidi zesisu kunye nokuhambisa ukuhamba kwezitulo emathunjini.
I-Wisepower ngumvelisi ngokuthe ngqo weMagnesium L-threonate eluhlaza,
Imveliso yenyanga ukuya kuthi ga kwi-3,000KG.
Is I-Magnesium L-threonate ulungile?
Ewe, iMagnesium L-threonate ilungele ukulala. Uninzi lwabantu lunengxaki xa kufikwa kumba wokulala esemgangathweni, kwaye ukwahlula umjikelo wokungalali kunokuba nzima kakhulu. Ungayitshintsha indlela yakho yokulala okanye unciphise ukuthatha ukutya kwe-caffeine kodwa ube usilela ukufumana iziphumo. Nangona kunjalo, ukuthatha ii-supplements ezifana neMagnesium L-threonate kunokukunceda ukuba ufumane ukulala okusemgangathweni.
Imaminerali efana ne-magnesium ineziphumo ezahlukeneyo kwinkqubo yomzimba wakho ekhuthaza ukulala. Ke, ukungabikho kwe-magnesium inokukhokelela kwiimeko zempilo ezibangela ukuqaqanjelwa. I-Magnesium L-threonate, ke, iya kuphucula imisebenzi yomzimba kunye neselula eya kuthi ekugqibeleni ikuncede ukuba ulale. Ukukhuthaza i-magnesium yokulala idlala ezi ndima zilandelayo emzimbeni wakho;
(1). Nceda umzimba wakho nengqondo yakho ukuba iphumle
Ukuze ufumane ukulala okusemgangathweni, ingqondo yakho kunye nomzimba kufuneka uphumle. Amanqanaba e-magnesium eyaneleyo kwinkqubo yomzimba wakho anceda ekuphumleni ingqondo nomzimba wakho ngokusebenza kwinkqubo ye-parasympathetic system, enoxanduva lokuhlaziya kunye nokuphumza iinkqubo zomzimba wakho. Magnesium ilawula ii-neurotransmitters, ezinoxanduva lokuthumela imiqondiso kuyo yonke ingqondo yakho kunye nomzimba. Kwelinye icala, ikwalawula ii-melatonin ezinoxanduva lokukhokela imijikelezo yokulala.
I-Magnesium ibophelela kwii-receptors ze-gamma-aminobutyric acid (GABA), eyi-neurotransmitter enoxanduva lokuthoba umsebenzi we-nerve. I-GABA yi-neurotransmitter efanayo esetyenzisiweyo ekwenzeni amayeza okulala anjengeAmbien. Ukuthulisa inkqubo yovalo kulungisa ingqondo nomzimba wakho ukuze ulale.
(2). Ukusilela kweMagnesium kuphazamisa ukulala
Ukunqongophala ngokwaneleyo kwemaminerali yemagnesium kwinkqubo yakho yomzimba kukhokelela kwiingxaki zokulala okanye ukulala. Ke ngoko, iMagnesium L-threonate ibalulekile ekuphuculeni amanqanaba emaminerali emzimbeni wakho ukukuqinisekisa ukuba ulala ngokusemgangathweni. Izifundo zonyango zibonisa ukuba amanqanaba aphezulu e-magnesium kubalulekile ekulaleni okuqhelekileyo. Nangona kunjalo, amanqanaba aphezulu kunye asezantsi e-magnesium anokukhokelela kwiingxaki zokulala, yiyo loo nto kucetyiswa ukuba uye kuvavanyo lonyango ngaphambi kokuba uqale ukuthatha Imagnesium L-threonate umyinge.
Izizathu ezahlukeneyo kunye neemeko zempilo zinokubangela ukusilela kwe-magnesium. Umzekelo, izifo zokugaya ezichaphazela umgudu wokugaya ukutya zingenza ukuba kube nzima emzimbeni wakho ukufumana amaminerali kunye neevithamini ngokufanelekileyo, okukhokelela ekuswelekeni kweMagesium. Isifo seswekile kunye nokuxhathisa kwe-insulin kukwadityaniswa nokulahleka kwesikakhulu.
Ubudala yinto eyimfuneko njengoko abantu abadala besitya izidlo ezine-magnesium encinci kunabantu abadala. Oko kuthetha ukuba abantu abadala abadala basengozini enkulu yokubandezeleka kwiimpawu zokushomeka kwe-magnesium njengeengxaki zokulala. Abantu abasela utywala kakhulu banokuba nengxaki yezimbiwa. I-magnesium eyaneleyo kuthetha ukuba uya kuphucula ukulala, kwaye kulapho iMagnesium L-threonate iza kuluncedo.
(3). Ilawula umgangatho wobuthongo
I-Magnesium ikunceda ukuba uphumle kwaye ulale ubuthongo obunzulu. Impembelelo zamaminerali kwinkqubo yovalo zenza kube lula ukuba ube nobusuku bokulala esemgangathweni. I-Magnesium ivimba iimolekyuli ekubophweni ngee-neurons, oko ke kunciphisa inkqubo yethambo, ekhokelela ekulaleni okusemgangathweni. Izifundo ezahlukeneyo zibonise ukuba kubaluleke kangakanani i-magnesium ekukhuthazeni ukulala. Okwangoku, izifundo ziqinisekisile impembelelo ye-magnesium ekusombululeni iingxaki zokulala phakathi kwabantu abadala.
ingqondo rukulinganisa iImpembelelo yeMagnesium L-Threonate
I-Magnesium L-threonate yayinelungelo elilodwa lomenzi emva kokufunyanwa kwamandla ayo okuphucula amanqanaba emagniziyam kwingqondo. Eli chiza lingena ngokukhawuleza kwinkqubo yomzimba kwaye lingena engqondweni ukwenza ukuba i-magnesium iguqule iimpawu zokuguga kwengqondo ezinje nge-deficit disorder (ADHD). Oku ADHD Ikhula ngokuthe ngcembe kwiminyaka edlulileyo, kwaye kunokuba nzima ukuyibona kumanqanaba ayo okuqala, kodwa imeko inxulumene nokuhla kwengqondo.
Abantu abadala abadala bathatha izidlo nge-magnesium encinci, ecacisa ukuba kutheni uswele i-magnesium ixhaphake phakathi kwabo. Kukho nezinye iimeko zempilo njengeengxaki zokugaya ukutya kunye neswekile eyehlisa amanqanaba e-magnesium emzimbeni. I-Magnesium yandisa amandla okwenza imisebenzi ye-nerve, iiseli zemisipha kunye namalungu omzimba ahlukeneyo.
Ukungabikho ngokwaneleyo kwe-magnesium kwingqondo kukhokelela kwiingxaki ezinje ngeengxaki zokulala, uxinzelelo, uxinzelelo, kwaye kuchaphazela nememori kunye nemisebenzi yokuqonda. Nangona kunjalo, iziphumo zinokwahluka ukusuka komnye umntu ukuya komnye, kodwa i-magnesium L-threonate ingazisombulula ngokwandisa amanqanaba amaminerali kwingqondo yakho.
Izifundo ezahlukeneyo zovavanyo kunye neemvavanyo zibonakalise amandla e-magnesium L-threonate ekubuyiseni iinkqubo zokuguga kwengqondo. Iziphumo eziveziweyo kuxa kwafunyaniswa ukuba iMagnesium L-threonate inokuguqula ngaphezulu kweminyaka esithoba yempembelelo yokuguga kwengqondo. Eli chiza lonyusa uxinano lwee-synapses, ezinxibelelana nonxibelelwano phakathi kweeseli zakho zobuchopho-ukulahleka kwesiphumo soxinano kwiziphumo zokuhla kwengqondo kunye nokuncipha kwengqondo.
Izifundo zibonisa ukuba i-12-veki ye-Magnesium L-threonate yolawulo iyakhuthaza ukusebenza kwengqondo kwaye iphinde ibuyisele ukuguga kwengqondo. Ngokwesiqhelo, ubuchopho buyehla njengoko usaluphala ngenxa yokwehla kwamanani kunye nokusebenza kweeseli zengqondo kunye neebhloko zazo zokutshintsha kweentsholongwane, ekubhekiswa kuzo njengee-synapses.
Ukuphulukana nee-synapses sesona sizathu siphambili sokwehla kwengqondo. Ke ngoko, amandla e-Magnesium L-threonate okonyusa uxinano lwee-synapses ayenza ibe yeyona nto ikhumbula kakuhle kunye nokuxhasa ukongeza ulwazi kwintengiso namhlanje. Nje ukuba amanqanaba e-magnesium kwingqondo yakho onele, unokuqiniseka ngokuguqula iingxaki zokuguga kwengqondo. Uviwo lwezamayeza ngaphambi, ngexesha, nasemva kokuba umjikelo wedosi uya kubaluleka ukubeka esweni inkqubela phambili yamayeza.
Yintoni enye izibonelelo ze-magnesium L-threonate?
Impilo yobuchopho kunye nokomeleza umgangatho wokulala ayisiyiyo kuphela izibonelelo oya kuzifumana ngokuthatha iMagnesium L-threonate. Eli chiza lidlala indima ebalulekileyo ekuphuculeni amandla okusebenza phantse kuwo onke amalungu eseli kunye namalungu emzimbeni wakho. I-Magnesium sisimbiwa esifunekayo ekufuneka umzimba wakho usebenze ngokuchanekileyo. Nazi ezinye Izibonelelo ze-Magnesium L-threonate;
(1). Nciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo
Ezi meko zimbini ziqhelekile kubantu abaninzi kule mihla, kwaye izizathu ezahlukeneyo zibangela. Nangona kunjalo, i-magnesium ibonakalise amandla ayo okulawula kunye nokunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo. Ubukhulu becala, ezi meko zengqondo mbini zinxulunyaniswa nokusilela kwe-magnesium. Ke ngoko, ukuba uswele ngokwaneleyo kule mineral kwingqondo yakho, unokufumana uxinzelelo noxinzelelo.
Amandla e-Magnesium yokuthomalalisa inkqubo yeemvakalelo inceda ekunciphiseni ukuphazamiseka kwezi mvakalelo. Uxinzelelo lwe-magnesium L-threonate kufuneka luthathwe phantsi kwemiyalelo kagqirha kwiziphumo ezingcono.
(2). Ukukhuthaza amathambo kunye nezihlunu ezisempilweni
Ukunqongophala kwe-Magnesium kukhokelela ekuqunjelweni komlenze kunye namathambo abuthathaka, ubukhulu becala kubudala. I-Magnesium L-threonate iyakwazi ukunyanga i-osteoporosis eyimeko eqhelekileyo kubantu abadala. Kwelinye icala, iimbaleki zithatha eli chiza ukubanceda ekuvuseleleni izihlunu emva kokusebenza kunye zombini kunye nokuvelisa amandla e-aerobic.
Izibonelelo ze-magnesium L-threonate zininzi, kwaye ichiza lisetyenziselwa unyango lweemeko ezahlukeneyo zempilo. Umzekelo, ichiza lisetyenziselwa ukuphelisa iintlungu emva kwesibeleko, uqhaqho kunye neentlungu zesifuba ezibangelwa yimithambo evalekileyo. I-Magnesium L-threonate ikwadlala indima ebalulekileyo kunyango lokulahleka kwendlebe, isifo seswekile, i-fibromyalgia, kunye nokwehlisa amanqanaba e-cholesterol phakathi kwezinye iimeko zempilo.
Yimalini I-Magnesium L-threonate kufuneka ndithathe?
I-Magnesium L-threonate sisiyobisi somlomo esithathwa ngomlomo. Ichiza ifumaneka ngohlobo tablet kunye nomgubo. Nangona kunjalo, umthamo we-magnesium L-threonate kuxhomekeke kumsebenzisi nakwimeko ephantsi konyango. Ugqirha wakho uya kuba ngoyena mntu ukuhleleyo Nangona likhona icebiso labavelisi bemithamo yabavelisi elihlala lihamba liye kuhlolo lwezonyango njengoko iinkqubo zomzimba womntu zahlukile.
I-magnesium L-threonate dosage ye-19-30 yeminyaka ubudala yi-400mg (amadoda) kunye ne-310mg ngemini kubafazi. Kwiminyaka engama-31 kunye namadoda amadala kufuneka athathe i-420mg kunye nabasetyhini ama-320mg ngosuku. Isibonelelo seDiary esicetyiswayo (RDA) sabafazi abakhulelweyo abaphakathi kweminyaka eli-14 ukuya kweli-18 ngama-400mg, ngelixa abo basusela kwiminyaka engama-19 ukuya kwengama-30 bungama-350mg nama-31-50 eminyaka bungu-360mg.
Abafazi abanamabhongo banokuthatha eli chiza ngolu hlobo lulandelayo; Iminyaka eyi-14-18 yeminyaka engama-360mg ngosuku, iminyaka eli-19 ukuya kwengama-30 ukuya kwengama-310 yeedosi ekhuthazwayo njenge-31mg ngeli xesha iminyaka engama-50-320 idosi ijikeleze i-350mg. Umthamo we-magnesium L-threonate imihla ngemihla ekumgangatho ophezulu kuye nakubani na oneminyaka engaphezu kwesibhozo ubudala ungama-XNUMXmg, kwaye oko kubandakanya zombini ukuncancisa kunye nabasetyhini abakhulelweyo.
I-Magnesium L-threonate isetyenziswa kunyango lweemeko ezahlukeneyo zempilo, kunye nedosi iyahluka ukusuka komnye umsebenzisi ukuya komnye. Umzekelo, kunyango lwe-indigestion (dyspepsia), umthamo ophakanyisiweyo osusela kwi-400-1200mg kufuneka wohlulwe kangangezihlandlo ezine ngosuku.
Ukufumana izibonelelo ezifanelekileyo zokuqonda, idosi ecetyiswayo yi-1000mg ukuba ithathwe kabini ngemini. Xa uthatha i-Magnesium L-threonate kwiingxaki zokulala, umthamo ochanekileyo uphakathi kwe-400-420mg ngemini yamadoda kunye ne-310-360mg yabasetyhini. Konke kuzo zonke, iMagnesium L-threonate (778571-57-6) idosi iyahluka ukusuka komnye umsebenzisi uye komnye; ke, qiniseka ukuba ufumana iyeza elifanelekileyo kumayeza akho.
WUkutya Hat Hat kuphakamile ngaphakathi I-Magnesium L-threonate?
Ngaphandle kokuthatha I-Magnesium L-threonate ukuphucula amanqanaba e-magnesium kwingqondo yakho, unokusebenzisa ukutya okunotye kwezi minerali. Oku kutya kunokukunceda ufumane amanqanaba e-magnesium engqondweni yakho kwaye wonwabele zonke izibonelelo zamaminerali. Nazi ezinye zokutya okuphezulu okunotyebi kwi-Magnesium L-threonate;
Chocolate Dark-Ngoku nje imnandi kwaye isempilweni, ithwala i-64mg ye-magnesium eyi-16% ye-RDI. Ngaphandle kwalonto, itshokholethi emnyama nayo inobutyebi kubhedu, isinyithi, kunye neManganese kunye nefibre prebiotic.
kuvuthwa-Esi siqhamo simnandi nesinempilo sinoku kukubonelela nge-58mg ye-magnesium emalunga ne-15% ye-RDI. Isiqhamo sityebile ngeevithamini B, K, kunye nomthombo omkhulu we potassium.
Amanqam- ikwabizwa ngokuba yenye yezona ndawo zilungileyo zendalo iMagnesium L-threonate. Isiza esinye se-cashews sine-1mg magnesium eyi-82% ye-RDI.
Umkhangeli njengoko i-peas, iilensi, iinyosi kunye neembotyi zesoya zityebile ngeiminerali ezahlukeneyo, kubandakanya i-magnesium. Umzekelo, ikomityi enye yeembotyi eziphekiweyo iqulethe i-120mg ye-magnesium, kwaye yiipesenti ezingama-30 zeRDI.
Kukho okunye ukutya okufana neTofu, imbewu ye-chia, imbewu yethanga, iintlanzi ezinamafutha, ukukhankanya ezimbalwa. Nxibelelana nomsebenzi okhathalela izondlo ngolwazi oluthe kratya malunga nokutya okutyebileyo kwe-magnesium.
Thenga Magnesium L-threonate kwi-intanethi
I-Magnesium L-threonate powder sisiyobisi esifumaneka ngokulula kuzo zombini ezivenkileni zomzimba nakwi-intanethi. Ungalithenga eli chiza kwintuthuzelo yeofisi yakho okanye ekhaya kwaye ulinde ukuhanjiswa ekufuneka kwenziwe ngumthengisi onokuthenjwa ngexesha elifutshane.
Nxibelelana nodokotela wakho ukukukhokelela ekufumaneni umgangatho we-Magnesium L-threonate nakumthengisi odumileyo kunye onamava. Ezahlukeneyo online Iidepho zeNootropics isitokhwe esi siyobisi kubandakanya iWalmart, iAmazon, kunye neMagnesium L-threonate iVitamini Shoppe.
Kukho nabanye abathengisi abakwi-Intanethi kodwa soloko usenza uphando lwakho ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nomthengisi weNootropic ngaphambi kokwenza iodolo yakho. Ukuthengwa kwe-Magnesium L-threonate kufuneka kuphathwe ngenkathalo njengokuthatha umgangatho osemgangathweni ophantsi, okanye ichiza elingumgunyathi linokukubonisa kwiziphumo ezibi.
Funda uphononongo lweNootropics ukwazi ngakumbi ngeMagnesium L-threonate abathengisi be-Intanethi kwihlabathi liphela. Okwangoku, iMagnesium L-threonate amazon kunye neMagnesium L-threonate Walmart yeyona mithombo ithandwayo yeNootropic. Iivenkile ezikwi-Intanethi zezona zilungileyo njengoko zikuvumela ukuba uthengele izinto ezahlukeneyo Izongezelelo zeNootropic ngefowuni yakho, ilaptop, okanye ithebhulethi. Jonga ukuba imveliso iya kuthatha ixesha elingakanani ukuhanjiswa kwindawo yakho kwaye ukhethe eyona nto intle uyithandayo.
I-Magnesium sisimbiwa esibalulekileyo sokunyusa ukusebenza kwengqondo, ukuphucula ukulala, kunye nokunciphisa iimpawu zokuguga kwengqondo kunye nokwenza iiseli zomzimba kunye namalungu asebenzayo. Kukho ezahlukileyo imithombo ye-magnesium, ukusuka kumayeza ukuya kukutya kwendalo. Ukunqongophala kwemagniziyam kubhenca abantu kwiimeko ezahlukeneyo zempilo ezinje nge-ADHD. Nangona kunjalo, ukukhula kweMagnesium L-threonate ADHD ziindaba ezimnandi kubantu abanamanqanaba asezantsi e-magnesium njengoko ibonakalisile ukuba sisiyobisi esinamandla seempawu zokusilela kwezimbiwa. Iyeza lisetyenziselwa ezinye iindlela zonyango njengokuphelisa iintlungu emva kotyando kunye nokunyusa amathambo kunye nempilo yezihlunu.
Xa ujonga uphononongo lwe-magnesium ye-L-threonate eyahlukileyo, unokutsho ngokuqinisekileyo ukuba uphakathi komthombo omkhulu we-magnesium. I-Magnesium L-threonate sisiyobisi esisemthethweni, kodwa kuya kufuneka uyithathe phantsi komyalelo kagqirha ukuze ufumane iziphumo ezingcono. Eli chiza liyafumaneka zombini kwiivenkile zomzimba kunye ne-intanethi. Ungaze uhlengahlengise umthamo phezulu okanye ezantsi ngaphandle kokumazisa ugqirha wakho. Kwimeko yazo naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga qhagamshelana namayeza akho kwangoko. Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-magnesium L-threonate kunye nokunye I-nootropics iyathenga, Nxibelelana neengcali zonyango.
Ilanga, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016). Ummiselo woxinaniso lolwakhiwo kunye nokusebenza kwe-L-threonate ngokumodareyitha koxinzelelo lwe-intraneuronal magnesium. Neuropharmacology, 108, 426-439.
UMazreku, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., Halili, F., kunye noHalili, J. (2017). Umsebenzi weCatalase (CAT), i-ALT kunye ne-AST kumacandelo ahlukeneyo eempuku zeSwitzerland iAlbino ezinyangwa nge-Lead Acetate, iVitamin C kunye neMagnesium-L-Threonate. Ijenali yoPhando lweKlinikhi kunye noPhononongo, 11(11).
IMickley, GA, Hoxha, N., Luchsinger, JL, Rogers, MM, kunye neeWiles, NR (2013). Ukutya okungapheliyo kwemagniziyam-L-threonate isantya sokuphela kunye nokunciphisa ukubuyela okuzenzekelayo kwimeko enqabileyo yokungcamla. Pharmacology Biochemistry kunye nokuziphatha, 106, 16-26.
UAbumaria, N., uLuo, L., Ahn, M., kunye noLiu, G. (2013). Isongezelelo seMagnesium sonyusa ukwahluka kwepateni yomxholo kunye nokuthintela uloyiko olukhulu. Ukuziphatha kwezonyango, 24(4), 255-263.
1.Yintoni iMagnesium L-threonate?
2.Sebenza njani iMagnesium L-threonate?
3.I-Magnesium L-threonate ilungile yokulala?
4.Ingqondo yokubuyisa ifuthe leMagnesium L-Threonate
5.Zintoni ezinye izibonelelo ze-magnesium L-threonate?
6. Ndingakanani i-Magnesium L-threonate endifanele ndiyithathe?
7.Kuphi ukutya okuphezulu eMagnesium L-threonate?
8.Buy Magnesium L-threonate kwi-intanethi
Anandamide (AEA): Yonke into ekufuneka uyazi ngayo